tiktok – OOTDMYANMAR
TIKTOK FASHION TRANSITION GUIDELINES
No Comments on TIKTOK FASHION TRANSITION GUIDELINES
If you are finallyaTiktok fam now because of curiousity/peer pressure/boredom, you’re not alone. It was reported that the app is actually approaching2BILLION lifetime installs partly due to the impact of coronavirus, which forced people to stay indoors. You’d be surprised that most of the editing work is done outside the app: It’s an easier way to sync songs with your footage, and although there’salearning curve, once you get the hang of things, it’s actually pretty fun!
ပျင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စပ်စုပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok ကိုစမ်းကြည့်ပြီး အရမ်းသဘောကျနေပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Corona Virus ကြောင့် လူတွေအားလုံး အိမ်ထဲမှာပဲနေကြရတဲ့အတွက် TikTok application ကို အသုံးပြုသူပေါင်း နှစ်ဘီလီယံကျော်ရှိပြီလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ TikTok video အများစုကို အခြား app တစ်ခုနဲ့ edit လုပ်ပြီးမှ TikTok ပေါ်မှာတင်လေ့ရှိကြတယ်ဆိုရင် အံ့ဩသွားမလား။ edit လုပ်ပြီးသား video ကို သီချင်းနဲ့ကိုက်အောင်ပြန်လုပ်တာက ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ ခက်ခဲမယ်ထင်ရပေမယ့် တစ်ခေါက်လုပ်ကြည့်ပြီးသွားရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
Since OOTDMYANMAR is mostlyafashion page we curated videos on how to make Tiktok fashion videos:
OOTDMYANMAR က Fashion Page တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် TikTok fashion video လေးတွေ ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
Enjoy and don’t forget to follow us @ootdmyanmar
Tags ootdmyanmar, recviews, reviews, tiktok